Guryo la’aanta ka jirta dalka oo saameeyn weeyn ku leh qoysaska soomaalida ee soo galootiga ah | shumis.net
Home » Layaab » Guryo la’aanta ka jirta dalka oo saameeyn weeyn ku leh qoysaska soomaalida ee soo galootiga ah
Boqolkiiba sagaashan goboladda dalka iyo degmooyinkiisa waxaa ka jira guryo la’aan baahsan iyo safafka loogu jiro oo aad u dheer. Arrintan oo dhibaatooyin badan ku keentay soo galootiga ku cusub dalka oo ay soomaalidu ka mid tahay.
Magaaladda Göteborg ayaan kula kulanay qoys soomaali ah oo diiday in muuqaaladooda la shaaciyo balse nala wadaagay dhibaatada guryo la’aanta sida gaarka ah u saameeysay. Qoyskan ayaa ka kooban 10 ruux marka lugu darro aabaha iyo hooyadda. Waxaa ay ka soo guureen waqooyiga Iswiidhan ee Kiruna sababo la xirriira cimilada adag ee halkaasi ka jirta. Kuna kaliftay ineey si indho la’aan ah iskugu soo tuuraan magaaladda oo ay qaraabo u joogta ku yihiin dulsaar.
Hooyadan oo Somaliska.com u warameeysay ayaa sheegtay ineey adag tahay in si dhaqso ahna u hesho guri oo intii ay joogta waqooyiga Iswiidhan iska diiwaan gelisay. Ceyrta magaaladda iyo xaafada ee degan tahay ayaa ku wargeliyey in ay adag tahay xaaladeeda waxna ka qaban karin, balse ay dhaqaale ahaan ka saacidayaan haddii ay iyaga soo helaan guri gacan labaad ah iwm.
Macalimiinta iskuuladda iyo dhaqaatiirta xaafadaha ayaa ka deyrinaya dhibaatada xagga caafimaad ee qoysaska soo galootiga ah u keento gaar ahaan iskuuladda oo laga dareemo culeeyska nafsad ahaaneed ee saaran iyo sidda eeysan niyad ugu heeyn waxbarashada iyo daal farro badan oo ka muuqda.
“Sidaan u soo degay magaaladan labo jeer ayaa iskuulka ilmaheeyga dhigtaan ii soo diray balan carruurteyda ah labadii jeerna waan ka soo gaari waayey sababtoo iskuulka aan SFI-ga u aado oo iga dheer, Waxaan dareemay in la igu dhibsaday taas, laakin ma dareensana daruufta kale ee guriga naga heeysta” ayey tiri hooyadan soomaaliyeed oo ku fekereysa ineey mar-kale ku laabato cirifka waqooyi ee dalkaan oo markeedii horeba uga soo carartay qabowga daran.
Ma ahan hooyadan soomaaliyeed oo keliya qoysaska ay dhibaatooyinkan heeystaan sidaas si la mid ah waxaa guri la’aan u heeysa haweeneyda lugu magacaabo Perihan Bayati waxaa ay dalka joogta muddo aad u dheer mana aaneey helin ilaa hadda guri ay leedahay, waxeey dulsaar ku tahay qaraabo oo ay dhibaato xagga iskuulka ku qabaan bacdamaa uu ka fog yahay halka ay dagan yihiin.
Magaaladda Malmö, waxaa ay ka mid tahay magaalooyinka dalkaan ku yaaala ee la daala dhacaya qaxooti tirro badan oo sanadkii 2015-kii ku soo jabay. Malmö ayaa sidoo kale saadaalineeysa in sanad walba ay iman doonaan magaaladda qaxooti lugu qiyaasayo 5000 ilaa 7000 tan iyo sanadka 2019-ka. Xafiiska guryaha laga dalbadana waxaa uu sheegay in 58 guri oo keliya ay ka banaan yihiin. Maamulka gobolka waxaa uu soo galootiga ka codsaday in degmooyinka iyo goboladda ku teetsan magaaladda Malmö ay ka raadsadaan guryo, tiiyo ay ku adag tahay laftooda lana ciirayaan guryo l’aan.
Title: Guryo la’aanta ka jirta dalka oo saameeyn weeyn ku leh qoysaska soomaalida ee soo galootiga ah